National Power News:: तपाईं जुलाईमा जन्मनु भएको हो ? जुलाईमा जन्मनेहरू रहस्यवादी National Power News:: तपाईं जुलाईमा जन्मनु भएको हो ? जुलाईमा जन्मनेहरू रहस्यवादी
तपाईं जुलाईमा जन्मनु भएको हो ? जुलाईमा जन्मनेहरू रहस्यवादी
जोसँग काम निकाल्नु छ उसलाई आफ्नो प्रशंसक बनाउन कुनै कसर छोड्नुहुन्न र जोसँग आप्mनो कुनै मतलब सिद्ध हुँदैन तीसँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्न । सामान्य अवस्थामा सार्‍है कुल देखिनुहुन्छ तर जब हट हुनुहुन्छ नि त्यतिबेला तातो तावा त के हो र ! तर अचम्म, मात्र आधा घन्टा वा अझ कम समयमै यस्तो देखिनुहुन्छ कि केही भएकै छैन । तपाईंको क्रोध धेरै बेर टिक्दैन ।
कुनै संस्थाको प्रमुख वा हाकिम हुनुहुन्छ भने तपाईंको अधीनका कर्मचारीहरूले तपाईंको रिस हुँदाहुँदै पनि रुचाउँछन् । घरमा पनि तपाई सबैको प्रिय र पुलपुल्याइएका कारण मान खोज्ने खालको हुनुहुन्छ । यो महिनामा जन्मनेहरू अक्सर खेलाडी वा विजनेसम्यान हुन्छन् । शेयर मार्केटिङको गणितमा सार्‍है कुशल हुन्छन् । गणित कमजोर भए पनि सम्बन्धको गणित भने सार्‍है सुन्दर तरिकाले हल गर्छन् । कहिल्यै पनि पैसाको परवाह गर्दैनन् र यिनीहरू खल्ती कहिल्यै खाली पनि हुँदैन । घर सुन्दर बनाउन सिपालु हुन्छन् ।
प्रेमको सवालमा यिनीहरूजस्तो गहिरो एवं समर्पित व्यक्ति पाउन मुस्किल हुन्छ । खासमा यिनीहरूलाई सहजै कसैसँग प्रेम हुँदैन । यिनीहरू हत्तपत्त कसैसँग प्रभावित हुँदैनन् तर जब हुन्छन् उनीहरूलाई सजिलै छोड्दैनन् । यिनीहरू व्यक्तित्व यति आकर्षक हुन्छ कि कसैलाई आकषिर्त गर्नका लागि अतिरिक्त मेहेनत गर्नै पर्दैन । यिनीहरू हतारको सिकार हुँदैनन् । प्रेमको मार्गमा हरेक कदम सोचविचारपूर्वक अघि बढाउँछन् । केही गरी भूलवश गलत कदम चाले पनि तुरुन्तै सम्हालिन्छन् । साथी गलत छन् भने त्यो कुरा यिनीहरूलाई थाहा भइहाल्छ अर्थात् कसैले पनि यिनीहरूसँग कुरा लुकाउन सक्दैनन् । सिक्स्थ सेन्सको प्रयोगका मामिलामा यिनीहरू अब्बल हुन्छन् । यिनीहरूमा सच्चा मानिसको परख गर्ने तागत हुन्छ ।